Munaasabada Maalinta Biyaha Adduunka oo laga xusay magaalada Jowhar - Jowhar Somali Leader
Home Somali Munaasabada Maalinta Biyaha Adduunka oo laga xusay magaalada Jowhar
Munaasabada Maalinta Biyaha Adduunka oo laga xusay magaalada Jowhar
Munaasabad lagu xusayay maalinta Biyaha Adduunka oo ay soo qabanqaabisay Wasaarada Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Hirshabelle ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowla goboleedka Hirshabelle.
Munaasabadan oo aheyd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ka socotay Maamulka Hirshabelle,xildhibaano,Maamulka gobolka Sh/dhexe, Maamulka degmada Jowhar iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Mas’uuliyiintii ka hadashay maalinta Biyaha ee 22 March ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar,duqa magaalada Jowhar Saalax Muudey Cali,Kusimaha Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Maxamed Cabdi Sheekh iyo mas’uuliyiin ka socotay Hirshabelle.
Waxaa ugu horeyn goobta ka hadalay guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar waxana uu sheegay in maamulkiisu uu dadaal dheer ku bixiyay sidii bulshada reer Jowhar u heli lahaayeen biyo nadiif ah
Ku simaha gudoomiyaha maamulka gobalka shebeelaha dhexe maxamed cabdi sheekh ayaa waxa uu tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay dhamaan bulshada ku nool Hirshabeele gaar ahaan kuwa Sh/dhexe inay helaan biyo nadiif ah.
Ugu dambeyn Wasiirka cusub ee wasaarada biyaha iyo tamarta dowlad gobaleedka Hirshabeelle Saalax Maxamed Xasan, ayaa sheegay wasaaradiisa door weyn iney ka qaadan doonto helida biyo wanaagsan, waxana uu sheegay inay si dhaw ula socdaan biyo la’aannta ka jirta deegaano badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Hirshabelle.
Sanad walba ayaa waxaa caalamka laga xusaa maalinta Biyaha oo ah 22ka March iyadoo sanadkan ay ku soo beegantay xilli biyo la’aan badan ay ka jirto deegaano badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya.
maalinta biyaha adduunkaoo laga xusay jowhar
Tirada dhimashada Coronavirus Talyaaniga oo gaartay toban kun oo ruux iyo wararkii ugu dambeeyay
Wiil dhalinyaro caan ka ahaa Dhuusamareeb oo maanta la dilay
Wasiir Goodax oo ka hadlay ujeedka ay ula wareegayan Iskuulkii 15 May ee ay gacanta ku heysay Masar